Otu esi etinye & Jiri ClamAV na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Tọzdee, Nọvemba 4, 2021 Tọzdee, Septemba 9, 2021 by Jọshụa James
Wụnye dabere na mbụ
Melite Database Virus ClamAV
Otu esi eji Clamscan jiri Ọmụmaatụ
Bipụta enyemaka ClamAV:
Bipụta naanị faịlụ ndị butere ọrịa:
Kwụsị ibipụta faịlụ OK:
Bipụtala nchịkọta na njedebe nyocha:
Ozi mgbịrịgba na nchọpụta nje:
Nyochaa akwụkwọ ndekọ aha ugboro ugboro:
Chekwaa mkpesa nyocha na faịlụ:
Nyochaa faịlụ ndị edepụtara n'ahịrị n'ahịrị na faịlụ:
Wepu faịlụ ndị butere ọrịa:
Bugharịa faịlụ ndị butere n'ime akwụkwọ ndekọ aha iche:
Machie ojiji ClamAV CPU
Otu esi ewepu ClamAV
ClamAV bụ ngwa ngwanrọ na-emepe emepe na nke efu nwere ike ịchọpụta ọtụtụ ụdị ngwa ngwa ọjọọ, gụnyere nje, trojans, malware, adware, rootkits, na ihe egwu ọjọọ ndị ọzọ. Otu n'ime isi ihe eji ClamAV eme ihe bụ na sava ozi dị ka ihe nyocha nje virus n'akụkụ nkesa ma ọ bụ jiri ya na sava nnabata faịlụ na-enyocha kwa oge iji jide n'aka na faịlụ dị ọcha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọha mmadụ nwere ike bulite na sava ahụ.
ClamAV na-akwado ọtụtụ ụdị faịlụ (akwụkwọ, executable, ma ọ bụ Archives), na-eji njirimara nyocha nyocha multi-thread, ma na-enweta mmelite maka nchekwa data mbinye aka ya kwa ụbọchị ruo mgbe ụfọdụ ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị maka nchebe kachasị ọhụrụ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ma jiri ClamAV na AlmaLinux 8.
Pịnye Y, mgbe ahụ, pịa igodo ntinye aga n'ihu.
Nyochaa ma agbakwunyere ebe nchekwa ahụ nke ọma; nke a nwere ike ime na dnf repolist iwu dị ka n'okpuru:
The Ụlọ ọrụ EPEL agbakwunyere nke ọma.
Ngosipụta dị mma, ị nwere ike iji iwu a ọzọ iji hụ mbubata ebe nchekwa ọ bụla n'ọdịnihu.
Site na ebe nchekwa agbakwunyere iji nweta ntọhapụ kacha ọhụrụ nke ClamAV, ị nwere ike ịwụnye ngwanro n'ezie, gụnyere nke ngwugwu ngwugwu nke ga-eme usoro mmelite na ngwanrọ antivirus na ndabere.
Iji tinye ClamAV site na EPEL Repository, mebie iwu a:
Nwụnye nke ị rụnyere na sistemụ gị gụnyere:
njide - Clam Antivirus Daemon.
klọm - Ngwa ndị ọrụ Clam maka iji Clam Antivirus.
clamavupdate - Clam Antivirus auto-mmelite maka faịlụ data.
Iji nyochaa ma nrụnye ahụ gara nke ọma yana iji kwado ụdị na nọmba nrụpụta jiri ihe ndị a:
Dịka ezinụlọ nkesa RHEL niile, AlmaLinux na-eji SELinux; nyere ka ClamAV si arụ ọrụ, ị ga-achọ ịhazi ya, yabụ enweghị nnyonye anya. Iji mee nke a, mee iwu a:
Ugbu a ị tinyela ClamAV, ị nwere ike ịga n'ihu imelite nchekwa data nje.
Ị ga-achọ ugbu a imelite nchekwa data ClamAV gị tupu ịmalite iji nyocha nje (clamscan). Ka imelite nkọwa ndị a, ị ga-achọ ka ejikọrọ sistemụ gị na ịntanetị site na iji ya (freshclam) iwu ọnụ.
Mbụ, a na-atụ aro ka ịkwụsị (clamav-freshclam) ọrụ tupu ị nwee ike imelite. Iji mee nke a, pịnye iwu a:
Ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu imelite nchekwa data nkọwa nje gị site na iwu njedebe a:
Na mmepụta, ị ga-enweta ihe ndị a dịka ọmụmaatụ:
Ozugbo emelitere nchekwa data, ị nwere ike ịmalite (clamav-freshclam) ọrụ, yabụ ọ na-eji iwu a na-emelite nchekwa data mbinye aka n'azụ:
Mgbe ịmalitere freshclam ka emelitere, chọpụta na ọ dị ka ndị a:
Mara, gbaa mbọ hụ na i meela ma ọ bụ gbanyụọ ClamAV na buut. Ị ga-achọkarị ka enyere nke a aka; Otú ọ dị, ịnwere ike ịnwe nkwarụ nke a na-akpaghị aka maka sistemu akụrụngwa ma ọ bụ mkpa ka ejiri aka mee ya n'oge na-adịghị mma mgbe ịchọrọ ịme nyocha akwụkwọ ntuziaka.
Kwado ClamAV na mmalite:
Gbanyụọ ClamAV na mmalite:
Rịba ama, (freshclam) na-ebudata ClamAV CVDS na ọdụ data na ebe ndekọ (/var/lib/clamav).
Ka ilele ndekọ aha, jiri ya (ls) iwu:
Ugbu a ị wụnyela ma kwalite ClamAV, oge eruola inyocha sistemụ gị ka ijide n'aka na ọ dị ọcha. A na-eme nke a na (clamscan) iwu. Ihe atụ nke syntax:
Nke a bụ ndepụta ihe atụ:
Chekwaa repo nyochart ka faịlụ:
Mara, nke a na-ehichapụ faịlụ na sistemụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo ụgha, ị gaghị enwe ike iweghachite faịlụ ahụ.
ClamAV n'oge nyocha nwere ike ịdị oke ike nke CPU, sistemụ na-arụ ọrụ na ngwaike nwere oke ma ọ bụ nke ochie nwere ike ịchọta usoro ịtụ ụtụ na sistemụ ha. Ụzọ dị mfe iji kpachie (CPU) n'oge nyocha bụ iji (mma) iwu n'ihu iwu ClamAV ọ bụla.
Ihe atụ nke a (mma) iwu iji belata ClamAV CPU:
Uru dị ukwuu nke iji usoro a bụ na ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọzọ na-eji CPU, ClamAV na-eji (clamscan) ga-abawanye ojiji CPU. Agbanyeghị, ọ bụrụ na usoro ọzọ nwere mkpa dị elu chọrọ CPU, mgbe ahụ clamscan ga-agbadata nke ọma iji kwe ka usoro nke ọzọ bute ụzọ.
Enwere nhọrọ ndị ọzọ ole na ole; Otú ọ dị, na (mma) iwu bụ ngwọta kacha mma. Ọ ga-ebuli CPU ma ọ bụrụ n'efu ma wedata ala mgbe ndị nrụpụta ndị ọzọ chọrọ ya, na-enye gị nchikota kacha mma na nchekwa.
Iwepu ClamAV na sistemụ arụmọrụ gị bụ usoro dị ngwa. Mezuo iwu ọnụ ọnụ iji wepụ:
Rịba ama, nke a ga-ewepụ ihe ndabere niile etinyere na ClamAV maka iwepụ kpamkpam.
N'ime nkuzi na-esote, ị mụtala otu esi etinye, melite na iji ihe atụ ClamAV na nkesa AlmaLinux 8 gị. N'ozuzu, ClamAV bụ ezigbo nyocha nje. Ọ bụ nke kacha mma? Ọfọn, nke ahụ bụ ruo arụmụka mgbe nile na ngwaahịa ndị ọzọ na-ebili ma na-ada; Otú ọ dị, ClamAV na-anọkarị n'elu 1 ruo 3 na ọtụtụ akwụkwọ ndị mmadụ na ọ bụ mgbalị siri ike iji nyere aka chebe sistemụ arụmọrụ gị na email na ma ọ bụ sava weebụ site na nje, malware, na ihe egwu ndị ọzọ.
Biko mara, n'agbanyeghị ụdị sọftụwia antivirus ndị a dị maka iji n'efu na sistemụ gị, o kwesịghị inye gị echiche nke nchekwa dịka ijide n'aka na sava weebụ ma ọ bụ desktọpụ gị siri ike site na iji usoro ezi uche dị na ya ga-azọpụta gị karịa. software ọ bụla nwere ike. Agbanyeghị, ClamAV bụ ngwa ọzọ dị na ngwa agha iji luso iyi egwu na-eto eto nke cyber ransomware, malware na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na i buru ụzọ mee usoro ahụ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji ClamAV, gaa na onye ọrụ gọọmentị akwụkwọ.
Otu esi etinye ma jiri ClamAV na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye & Jiri ClamAV na Rocky Linux 8
Otu esi etinye & hazie Linux Malware Chọpụta…
Otu esi etinye & hazie Apache (httpd) na Ka anyị…
Otu esi etinye Nginx na AlmaLinux 8
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, ClamAV Mail igodo